Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gobolka Mudug iyo tirada dhimashada oo sii kordhaysa. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gobolka Mudug iyo tirada dhimashada oo sii kordhaysa.
June 28, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Galkacyo)-Guud ahaanba waxaa xaalad deganaansho laga dareemayaa deegaanka Wisil ee Koonfurta Gobolka Mudug, halkaas oo shalay ay ku dagaalamaeen Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo Al-Shabaab.
Guud ahaan waxaa korortay tirada dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka Wisil oo ahaa kuwa ku bilaawday qarax, iyada oo dadkii ku dhaawacmay la keenay Magaalada Muqdisho.
Qof kamid ah dadka ku nool degaanka Wisil oo ku yaal inta u dhaxeysa Magaalooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo ayaa sheegay in badi dadkii ku noolaa degaankan Wisil ay u barakaceen degaanka Xero-dhagaxleey oo 25 lkm u jira degaanka Wisil, iyaga oo ka cabsi qaba in markale dushooda lagu dagaalamo.
Xogihii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ciidanka dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka Galmudug iyo maleeshiyaad deegaanka ah ay wadaan dhaq dhaqaaqyo ciidan si ay uga hortagaan weerraro kale oo kaga yimaada dhinaca Al-Shabaab.